अहिलेका बालबच्चामा किन चाडै यौ’न परिपक्कता ? कारण जान्नुहाेस – Hamrosandesh.com
अहिलेका बालबच्चामा किन चाडै यौ’न परिपक्कता ? कारण जान्नुहाेस
अहिलेका धेरैजसो बच्चामा स्वभाविक उमेरभन्दा अगाडि नै यौ’न परिपक्कता देखिन्छ । अर्थात उनीहरुको यौ,नाङ्गको विकास, मासिक श्राव, स्तनको विकास आदि चाडै हुन थालेका छन् ।
जस्तो विगतमा १३ वा १४ बर्षपछि मात्र बालिकाको मासिक श्राव सुरु हुन्थ्यो । अहिले ८ वा १० बर्षभित्र मासिक श्राव हुनसक्छ । यौ,नाङ्गहरुको विकास पनि त्यही अनुसार भएको छ । नेपालमा मात्र होइन, विश्वकै बालबालिकामा यस्तो परिवर्तन देखिदैछ । आखिर किन उनीहरुमा चाडै यौ,न परिपक्कता देखिदैछ ? यसमा एउटा मात्र कारण छैन । जलबायु परिवर्तनको प्रभावदेखि, खानपान शैली र यौ,नजन्य सामग्रीमा उनीहरुको पहुँच जस्ता अनेक कारण छन् ।
यसले के फरक पार्छ त ?
जटिलता यही प्रश्नमा छ । सामान्यत स्वभाविक उमेर भन्दा कम समयमै यौ,न परिपक्ता आउनु खास समस्या होइन । समस्या के हो भने, शारीरिक रुपमा जसरी यौ,न परिपक्कता देखिदैछ त्यस अनुपात मानसिक रुपमा उनीहरु परिपक्क छैनन् । अर्थात उनीहरुमा भइरहेको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न र स्वीकार्नका लागि उनीहरु तयार छैनन् । यसले उनीहरुमा मानसिक समस्या थपिदिएको छ । साथै यौ,न विकृती समेत निम्त्याएको छ ।
उदाहरणका लागि पछिल्ला केही घट,नाहरु काफी छन् । हामीले विभिन्न माध्यामबाट सुन्दै र पढ्दै आइरहेका छौं कि साना बालबच्चाहरुमा यौ,न कृत्यको घटना । १२, १३ बर्षका बालकहरु आफ्नै उमेरकी बालिकामाथि यौ,न कृत्य गर्न तम्सिएका उदेगलाग्दो घटना सुनिने गर्छ ।
बालबालिकामा यौ,न परिपक्कताले निम्त्याएको एउटा खत,रा हो यो ।
यौ,न मनोविज्ञहरुका अनुसार अहिले विश्वव्यापी रुपमै बच्चाहरुमा यौ,निक परिपक्ता बढ्दै गएको पाइन्छ । यसले अभिभावकमा सुरक्षाको दवाब बढाइदिएको छ । आफ्ना बालबच्चा उनीहरुकै सहपाठीबाट असुरक्षित हुनसक्छन् भन्ने कुरामा सर्तक बन्नुपर्ने अवस्था छ ।
कारण के होला ?
यस किसिमको परिवर्तनको पछाडि विश्वव्यापी बढ्दै गएको ग्लोबल वार्मिङदेखि विद्युतिय उपकरणको प्रयोगबाट उत्सर्जन हुने विकिरणले यसमा भूमिका खेलेको बताइन्छ । अहिले बच्चाहरुको खानपानले समेत यौ,निक परिपक्ता ल्याउनमा भूमिका खेलेको छ । खानामा विषादीको प्रयोग, एन्टिबायोटिक्सको प्रयोग अधिक हुने भएकाले त्यसले शरीरमा हर्मोनल गडबडी ल्याएको छ ।
बोइलर कुखुरालाई छिटो बढ्नका लागि दिने दानापानीमा प्रयोग गरिने एन्टिबायोटिक्स लगायतका तत्व त्यही कुखुराको मासुको माध्यामबाट बालबालिकाको शरीरमा प्रवेश गरेको छ । सागपात, फलफूल छिटै ठूलो बनाउन, छिटो पकाउन प्रयोग गरिने औषधीहरुको सोझो असर समेत बच्चाहरुको स्वास्थ्यमा परेको छ । यसले उनीहरुमा यौ,निक परिपक्कता बढ्दै गएको बताइन्छ ।
अहिलेका बच्चाहरुले मोवाइल, ल्यापटप, टिभी आदि माध्यामबाट यौ,नजन्य सामाग्री सहजै हेर्न सक्छन् । सानै उमेरमा उनीहरु यौ,नजन्य श्रव्यदृश्य सामाग्रीमा रमाउन थालिसकेका पाइन्छ । यसल किसिमको सामाग्रीले पनि उनीहरुमा यौ,नजन्य कृत्य गर्न उक्साइरहेको छ ।
जुन हिसाबले यौ,निक परिपक्कता बढ्दैछ, त्यसलाई स्वभाविक प्रक्रियाको रुपमा बुझाउनका लागि अभिभावक नै अग्रसर हुनुपर्ने छ ।
बच्चालाई सानै उमेरमा यौन,का बारेमा सही र तथ्यपरक जानकारी दिनुपर्छ । उनीहरुमा हुने शारीरिक परिवर्तनका बारेमा बुझाउनुपर्छ ।
मासिक श्राव होस् वा प्रजनन अंगको परिवर्तन, बच्चाहरुलाई त्यसको स्वभाविक प्रक्रियाबारे खुलस्त जानकारी दिनुपर्छ । आमाबुवाले छोराछोरीसँग मित्रवत् व्यवहार गर्ने, घुलमिल हुने, उनीहरुको मनोदशा बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ । अनलाइनखबरबाट